Fandrobana teny 67 ha :: Tra-tehaka ny andian-jiolahy mpanafika « cash point » • AoRaha
Fandrobana teny 67 ha Tra-tehaka ny andian-jiolahy mpanafika « cash point »
Voasambotry ny polisy teny Andavamamba, tamin’ ny alakamisy 19 marsa lasa teo, ny lehilahy roa voarohirohy ho nanafika “cash point” teny amin’ny 67 Ha, roa volana lasa izay. Karohina ny naman’izy ireo iray voalaza fa mitazona basy. Izy roa lahy kosa nogadraina eny amin’ ny fonjaben’i Tsiafahy, taorian’ ny nitondrana azy ireo teny amin’ny Fampanoavana, afak’omaly.
Tokony ho tamin’ny 11 ora alina no nisehoan’ny fana fihana nataona lehilahy telo teny amin’iny faritra 67 Ha iny, tamin’ny 30 janoary. Lasibatra ny toerana iray fikirakirana vola amin’ny alalan’ny finday na “cash point”. Tsy nisaron-tava ireo olondratsy saingy nitondra basy poleta sy antsy lava. Fito tapitrisa ariary sy finday maromaro no voaroba tamin’izany.
“ Nitohy hatrany ny fanadihadiana. Nahazo vaovao izahay momba ireo olon-dratsy ka voasambotra teny Andavamamba ny lehilahy roa. Nahatrarana antsy lava iray tany amin’izy ireo. Nohamafisin’ny mpitory fa anisan’ireo nanafika ireto voasambotra. Mbola hita tao an-tranon’ iretsy farany ny akanjo nanaovan’ izy ireo nandritra ny fanafihana”, araka ny tatitra avy amin’ny mpanao famotorana.
Niara-nisalahy tamin’ny fitadiavana sy fisamborana an’ireto jiolahy ireto ny polisy miasa eny amin’ny kaomisaria eny Isotry sy ny avy ao amin’ny borigady misahana ny heloka bevava (BC) etsy Anosy. Tratehaka tsikelikely ireo olon-dratsy mpandroba “cash point” teto an-drenivohitra. Efa nisy ireo voasambotra sy naiditra am-ponja vonjimaika, ankoatra ireto teny Andavamamba ireto, toy ny mpivady iray sy mpikirakira “cash point” sarona andro vitsivitsy lasa izay. Mitohy ny fikarohana ny sasany indrindra ireo fantatra fa mitondra ny fitaovam-piadiana.
Fivezivezena tamin’ny alina :: Olona sivy ambin’ny folo voasambotra teny Analakely